Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Tanzania » Mapaki eTanzania akatumidza nzvimbo dzepamusoro kune vanofarira kunze
Mapaki eTanzania akatumidza nzvimbo dzepamusoro kune vanofarira kunze
Mapaki matatu epamusoro epasirese ari mudunhu reAfrica akapfuma kwazvo akaonekwa pakati pemapaki makumi maviri neshanu epamusoro kubva pasirese, nekuda kwemaonero evafambi kuburikidza nepuratifomu yeTrip Advisor.
zveTanzania Serengeti, Kilimanjaro neTarangire national parks dzakavhoterwa nzvimbo dzakanakisa dzevanofarira kunze, zvichisimudza chimiro chenyika senzvimbo yekutanga yekushanya.
"Serengeti inova nzvimbo yepamusoro yevanofarira kunze muAfrica uye yechitatu muNyika muna 2022,” inonyora kudaro Trip Advisor.
Vafambi vakasarudzawo mapaki emunyika eTarangire neKilimanjaro nzvimbo dzakanakisa dzepasirese.
Mubairo weVafambisi Choice unopihwa gore rega rega kuburikidza nechirongwa cheTrip Advisor.
Mumiriri achangogadzwa weConservation Commissioner wedare rehurumende rinoona nezvekuchengetedza - Tanzania VeNational Parks (TANAPA), VaWilliam Mwakilema, vakatambira mashoko aya nerutendo vachiti izvi zvinoratidza chivimbo chekuti Tanzania iri kuenderwa nevatengi pasi rose.
“Tave kushanda nguva yakawedzerwa kuchengetedza mapaki enharaunda aya, tinofara zvikuru kuti pasi rose raona kushanda nesimba kwatakaita,” VaMwakilema vakatsanangura.
Mumwe ari kushushikana zvikuru nenhau iyi ndiTANAPA Assistant Conservation Commissioner In-Charge weBusiness Portfolio, Amai Beatrice Kessy, avo vati vatengi vepasi rose vange vasina divi ravakarerekera mukucherechedza kunaka kweTanzania.
Vaenzi vekunze ku Serengeti inofanira kugadzirirwa kushamiswa nehukuru hwepaki yenyika umo nyika yakawanda inoenderera mberi nokusingaperi. Pavanenge vari mupaki, vanogona kuona kutama kwepagore kweSerengeti kwakakurumbira, kutama kukuru uye kwakareba kupfuura dzimwe nyika panyika.
Mapani akakura eSerengeti anosanganisira mahekita 1.5 miriyoni esango, ane nharaunda huru yasara isina kuchinjwa yemhara mamiriyoni maviri pamwe nemazana ezviuru zvemhara nembizi dziri kufamba rwendo rwepagore rwemakiromita 1,000 XNUMX kubva kunyika mbiri dziri pedyo. Tanzania neKenya, sezvikara zvavo zvinovatevera.
Iri pamusoro pemamita 8,850, Kilimanjaro National Park, zvakare, inodzivirira nzvimbo yakakwirira yeAfrica uye gomo refu rakasununguka pasi rose, rinokwira kusvika mamita anoda kusvika 20,000.
Pamukwidza, makomo egomo anoshanduka kuita masango akasvibira, achishanda semusha wenzou, ingwe nenyati.
Kuwedzera kune mamoorlands akafukidzwa nehofori heather, ipapo nyika yerenje remakomo. Kuwedzera kunouya aizi nesinou zvinoita kuti Kilimanjaro ikurumbire. Kukwira kumusoro, kunonzi Uhuru Peak, kunotora mazuva matanhatu kusvika manomwe.
Mai Kessy vanoti gungano reMount Kilimanjaro, iro rinoshanyirwa zvikuru nevashanyi iro riri pamamita 5,895 50,000 kubva pamusoro pegungwa, rinokwezva vanokwira makomo zviuru makumi mashanu kubva pasi rose pagore.
Yakatumidzwa rwizi rwunopfuura nemunzvimbo yaro inoshamisa, Tarangire National Park inopa vashanyi chiitiko chakasiyana cheTanzania.
Paki iyi inogara nzou dzakawanda munyika. Unogona kuona mapoka anosvika mazana matatu achichera rwizi rweTarangire munguva yekusanaya kwemvura. Inosanganisirawo dzimwe mhuka dzemusango dzinobva paimpala kusvika kumapembere nenyati.
Kunyangwe safaris iri inokwezva yakakurumbira munzvimbo iyi, inosangana nezvinomera zveko zvakaita semabaobabs kana miti yehupenyu sekuzivikanwa kwavanoita uye netiweki yakaoma yemachakwi inofadza vanoda zvisikwa.
Nevashanyi vangangosvika miriyoni imwe nemazana mashanu vanoshanyira nyika gore rega rega, kushanya kwemhuka dzemusango kuTanzania kuri kuramba kuchikura, zvichiita kuti mari yenyika iwane mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emadhora, yakaenzana nechikamu che1.5 muzana cheGDP, ichisimbisa chinzvimbo cheindasitiri seiri kutungamira kuwana mari yekunze.
Pamusoro pezvo, kushanya kunopa zvakananga maTanzania mabasa mazana matanhatu ezviuru, ndoda vamwe vanopfuura miriyoni imwe vachiwanawo mihoro yavo kubva mukukosha kweindasitiri.
Kunyangwe indasitiri iyi yakarohwa zvakaipisisa mushure mekuputika kwedenda reCCIDID-19 munaKurume 2020, zvirongwa zvekudzoreredza nyika nedunhu sezviri pachena zvakatanga kubhadhara mibairo.
Africa Business Covid-19 COVID-19 dambudziko Gomo reKirimanjaro Serengeti Tanzania Tarangire National Park
Rwisa kuneta nekutora nguva kuronga zororo rako
Chocolate + Waini = Austria: Yakanaka!
India Waterways Conclave 2022 Inogona Kuunza Kuvhiya mu ...